သင့်ရဲ့ Business ကို သင့်တော်တဲ့ Digital Marketing Agency တစ်ခုနဲ့ အလုပ်အပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ? -
ပထမဆုံးအချက် အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် Agency ကို မဆက်သွယ်ခင်မှာ Agency ကိုအပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Objective တွေကို သေသေချာချာ မှတ်တမ်းပြုစုပါ။ သင့်ရဲ့ Website (သို့မဟုတ်) Page တွေမှာ လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် Research လုပ်ထားပါ။ လုပ်ငန်းအပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဥပမာ – သင့်ရဲ့ Product ရောင်းအား ကောင်းလာစေချင်တာလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်း အတွက် Follower တိုးလူသိများလာစေချင်တာလား? စသဖြင့် အလုပ်အပ်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ ဒီလို သေချာဆုံးဖြတ်ပေးမှသာ Agency ဘက်ကလည်း Solution သေချာ ရှာပြီး အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိအလားအလာရှိတဲ့ Goal တစ်ခုထားရှိပါ
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Goal ဟာအမှန်တကယ် လက်တွေ့မှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။သင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ Goal ဟာ လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ဝေးကွာပြီး လွဲချော်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်မှာတင် အောင်မြင်ဖို့ လမ်းစ အနည်းငယ် ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီဆိုရင်တော့ Agency ကို သေချာစွာဖြစ်လိုတာကိုပြောပြပေးပါ။ Agency ကောင်းတစ်ခုဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ Goal ဟာအမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမရှိကို သေချာစွာသိနိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို တို့ကို ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
သုံးစွဲမဲ့ Budget ပမာဏကို ကြိုတင်ထားရှိပါ
အပေါ်ကအချက် လိုပါပဲ Agency ကိုမဆက်သွယ်ခင်မှာပဲ မိတ်ဆွေတို့ သုံးမယ့် ငွေပမာဏ Annual Marketing Budget ကိုကြိုပြီး တွက်ချက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။သင် ဖြစ်ချင်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သုံးနိုင်မဲ့ ငွေပမာဏ အပေါ်မူတည်ပြီး ရလာဒ်တွေ ကွာခြားမှာဖြစ်ပြီး မိမိသုံးနိုင်မဲ့ Budget နဲ့ သင့်တော်မဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်တာတွေကို Research လုပ်ပေးပါ
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Goal နဲ့ Objective အပေါ်မူတည်ပြီး Agency က လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာစွာ ကိုယ်တိုင် Researching လုပ်ပေးပြီး လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြဖို့လိုပါတယ်။ Agency ကိုအပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ Result နဲ့ မအပ်ခင်က ရရှိခဲ့တဲ့ Result တွေကို Review လုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Digital Marketing Agency နဲ့လက်တွဲလုပ်ချင်သူတွေအဖို့ သိသင့်တဲ့အချက်တွေထဲက အနည်းငယ်ဖြစ်ပြီး Long Term လက်တွဲဖို့ရန်အတွက် မှန်ကန်သင့်လျော်ပြီး ထိရောက်တဲ့ Digital Marketing Agency ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ မတ် 29, 2019/ Blog/0Comment